အော်ဒါများ | ONE Championship ဆိုင် Myanmar
အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကလေးများ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ
အမျိုးအစားများသို့ပြန်သွားရန် အမျိုးသား ထိပ်
အမျိုးအစားများသို့ပြန်သွားရန် အမျိုးသမီး ထိပ်
အမျိုးအစားများသို့ပြန်သွားရန် ကလေးများ ထိပ်
အမျိုးအစားများသို့ပြန်သွားရန် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ဦးထုပ်များနှင့် ကက်ပ်ဦးထုပ်များ
ဆိုင် ဦးထုပ်များနှင့် ကက်ပ်ဦးထုပ်များ
ဆိုင် အားကစား အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ
မေးလေ့ရှိမေးခွန်းများ ပစ္စည်းပြန်ပို့မှုနှင့် ငွေပြန်အမ်းမှုမူဝါဒ
အော်ဒါတစ်ခုကို မည်သို့ မှာယူထားရှိရမည်နည်း။？
။ ကုန်ပစ္စည်းများကို မည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း။？
။ ကျွန်ုပ်၏စျေးခြင်းတောင်းထဲမှ ပစ္စည်းများကို မည်သို့ ထည့်သွင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားရမည်နည်း။
။ Facebookပေါ်မှ အော်ဒါမှာယူထားရှိရန် ဖြစ်နိုင်ပါသလား။?
။ ဘောက်ချာ တစ်ခုကို အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း ပစ္စည်းပြန်ပို့လိုပါသည်။ ထိုဘောက်ချာကိုပြန်ရမည်လား။
အော်ဒါမှာယူထားရှိပြီးနောက် ကျွန်ုပ်၏ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါသလား။？
ONE Championship တွင်ရရှိနိုင်သည့် ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများမှာ အဘယ်နည်း။?
ငွေပေးချေမှုအတွက် မည်သည့် ခရက်ဒစ်ကဒ်များကို လက်ခံပါသနည်း။？
ငွေအဝင်အထွက်လုပ်ငန်းပြီးစီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် ONE Championship မှကျွန်ုပ်၏ခရက်ဒစ်ကဒ်အချက်အလက်များကို သိမ်းထားပါသလား။？
။ "အော်ဒါအတည်ပြုခြင်"အီးမေးလ်တစ်ခုကို ကျွန်ုပ်ရရှိထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပစ္စည်းကို မည်သည့်အချိန်တွင် ရရှိမည်နည်း။？
ပို့ဆောင်နေချိန်အတွင်း ကျွန်ုပ်အိမ်၌မရှိလျှင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။?
ပို့ဆောင်နေချိန်အတွင်း ကျွန်ုပ်အိမ်၌မရှိလျှင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။？
ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိအော်ဒါအတွက် ပို့ဆောင်မှုလိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ်/လက်ခံသူကို မည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်မည်နည်း။?
ပို့ဆောင်နေချိန်အတွင်း ပစ္စည်းကိုလက်မှတ်မထိုးမီ စစ်ဆေးနိုင်ပါသလား။？
ပို့ဆောင်သည့်ဝန်ဆောင်မှု၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သော အချိန်များမှာ အဘယ်နည်း။？
ပို့ဆောင်ရန်အတည်ပြုချက် အီးမေးလ်ကို ရရှိခဲ့သော်လည်း ပစ္စည်းများကို မရရှိသေးပါ။？
ပစ္စည်း3ခုကို မှာယူထားရှိသော်လည်း 1 ခုပဲရရှိခဲ့သည်။အဘယ်ကြောင့်နည်း။？
ONE Championship ရုံးရှိ ကျွန်ုပ်၏အော်ဒါကို ONE Championship ရုံးမှ သွားယူနိုင်ပါသလား။?
နောက်တစ်နေ့ပို့ဆောင်မှုကို ရရှိရန် ။ ဖြစ်နိုင်ပါသလား။?
ငွေပြန်အမ်းရန်အတွက်ရွေးချယ်မည့်အစား ကျွန်ုပ်၏အော်ဒါကို လဲလှယ်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။？
ချွတ်ယွင်းချက်ရှိသော သို့မဟုတ်ား။ မမှန်ကန်သောပစ္စည်းကို လဲလှယ်နိင်ပါသလား။?
။မည်သည့်ပစ္စည်းများမှာ ပစ္စည်းပြန်ပို့ရန်အတွက် အရည်အချင်းမပြည့်မီခြင်းမရှိသနည်း။?
ကျွန်ုပ်အားပြန်အမ်းသည့်ငွေပမာဏ မှန်ကန်ခြင်းမရှိပါက ဘာလုပ်သင့်သနည်း။?
အောက်ပါ ရိုးရှင်းသောအဆင့်များကို လိုက်နာခြင်းအားဖြင့် ONE Championship အကောင့်ကို သင်ဖန်တီးနိုင်ပါသည်−
ONE Championship အကောင့်သစ်တစ်ခုအား သင်၏gmailအိုင်ဒီ သို့မဟုတ် Facebook မှတဆင့် ဖန်တီးပါ
ပြီးစီးသည့်အခါ “တင်သွင်းပါ”ကိုနှိပ်လိုက်လျှင် အားလုံးပြီးစီးပါပြီ။
သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည့် အရောင်နှင့် ဆိုဒ်ကိုရွေးပါ
ခြင်းတောင်းသို့ထည့်ပါကိုနှိပ်ပါ သို့မဟုတ် “ဆက်လုပ်ပါ”ကိုနှိပ်ပါ
Facebook /Gmail မှတဆင့် ဆိုင်းအင်ဝင်ပါ
လုံခြုံစိတ်ချရသောစာမျက်နှာတွင် သင်၏ငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်အချက်များကို ရိုက်ထည့်ပါ
ဝူဟူး။ သင်၏အော်ဒါကို အောင်မြင်စွာမှာယူထားရှိပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် အော်ဒါအတည်ပြုချက်အီးမေးလ်တစ်ခုကိုရရှိလိမ့်မည်။
လက်ညာဘက်ထိပ်ပိုင်းရှိထောင့်၌ “ရှာဖွေရန်ဘား”ပေါ်တွင်စုဆောင်းမှုများ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ဘရန်းများ၊လှုပ်ရှားမှုများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ သင်ဘာကိုရှာဖွေနေသည်အား ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောပြပါက ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့ရှာပေးပါမည်။
ပစ္စည်းများထည့်သွင်းရန်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာပေါ်ရှိ “ခြင်းတောင်းသို့ထည့်ပါ”ပေါ်တွင် နှိပ်နိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်းများ ဖယ်ရှား သို့မဟုတ် ကြည့်ရှုရန်အတွက် “ခြင်းတောင်းသို့သွားပါ” သို့မဟုတ် “ခြင်းတောင်းအိုင်ကွန်” (ဒက်စ်တော့ပ်ပေါ်ရှိ စာမျက်နှာ၏လက်ယာဘက်ထိပ်ထောင့်)ကိုနှိပ်၍ သင်ဖယ်ရှားလိုသည့် ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ပါ။
မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ် shop.onefc.com မှတဆင့်သာ အော်ဒါမှာယူထားရှိနိုင်ပါသည်
။ ဘောက်ချာ တစ်ခုကို အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း ပစ္စည်းပြန်ပို့လိုပါသည်။ ထိုဘောက်ချာကို ပြန်ရမည်လား။
ဘောက်ချာတစ်ခုလျှောက်ထားရန်အတွက်၊ ခြင်းတောင်း > "မတူညီသောကူပွန်တစ်ခုကိုလျှောက်ထားပါ" > ကူပွန်အသစ်အမည်ကို ထည့်သွင်းပါ ကိုနှိပ်နိုင်ပါသည်
ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ရန်အတွက်၊ခြင်းတောင်း> "ဆက်လုပ်ပါ" > ပို့ဆောင်ရန်လိပ်စာရွေးပါ သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းပါ > ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းရွေးချယ်ပါ (COD/ခရက်ဒစ်/ဒက်ဘစ်ကဒ်/ အော့ဖ်လိုင်းအီးပေး၊ အင်တာနက်ဘဏ်လုပ်ငန်း)၊ကိုနှိပ်ပြီးနောက်“ငွေပေးချေပါ”ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။ ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ အော်ဒါမှာယူထားရှိပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် သင်၏ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကို ပြောင်းလဲနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့မှ အောက်ပါ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကို ပေးထားပါသည်−
ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတစ်ခုစီအတွက် နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်များအတွက်၊အောက်ပါအီးမေးလ်လိပ်စာမှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ−
ONEChampionship သည် VISA, Amex သို့မဟုတ် Mastercard တို့မှထောက်ပံ့ပေးထားသည့် အဓိကခရက်ဒစ်ကဒ်အားလုံးကို လက်ခံပါသည်။ သင်၏ကဒ်အသေးစိတ်အချက်များကို PCI DSS လိုက်နာမှု(ငွေပေးခေမှုကဒ်လုပ်ငန်းဒေတာလုံခြုံမှုစံနှုန်း)ကိုသုံး၍ ကာကွယ်ပေးထားမည်ဖြစ်ကာ၊ ၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေမှုဂိတ်ဝေးပါတနာများမှ အသုံးပြုသည်။
သင်၏အော်ဒါပြီးစီးပြီးနောက်တွင် ခရက်ဒစ်ကဒ်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မှထိန်းသိမ်းထားခြင်းမရှိပါ၊ ၎င်းအား ငွေပေးချေမှုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေမှုဂိတ်ဝေးပါတနာများထံသို့တိုက်ရိုက်တင်သွင်းပါသည်။ ONE Championship ပေါ်ရှိခရက်ဒစ်ကဒ်ငွေအဝင်အထွက်လုပ်ငန်းမှန်သမျှကို လုံခြုံစိတ်ချရသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအတွင်း ဖြစ်ပေါ်သည်ကို စိတ်ချပေးပါ။ သင်၏ကဒ်အသေးစိတ်အချက်များကို PCI DSS လိုက်နာမှု(ငွေပေးခေမှုကဒ်လုပ်ငန်းဒေတာလုံခြုံမှုစံနှုန်း)ကိုသုံး၍ ကာကွယ်ပေးထားမည်ဖြစ်ကာ၊ ၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေမှုဂိတ်ဝေးပါတနာများမှ အသုံးပြုသည်။
အလုပ်လုပ်ရက် 3-5 ရက်အတွင်း။
သေချာပေါက်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် များစွာသောပို့ဆောင်သူပါတနာများနှင့် အတူလုပ်ဆောင်သည့်အတွက်၊ ၎င်းတို့တစ်ဉီးစီတိုင်းတွင် SMS၊ အီးမေးလ်း၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု စသည်ဖြင့် ကိုယ်ပိုင်ဆက်သွယ်ရေးအဆင့်များရှိပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းတို့က ဖောက်သည်ကို မရောက်ရှိမီကြိုတင်၍ ဆက်သွယ်ပါသည်၊ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့မှ ယင်းအား အာမခံချက်မပေးနိုင်ပါ။ သင်၏ပို့ဆောင်ရန်အားထုတ်မှုပြုသည့်အချိန်တွင် သင်ရှိမနေပါက၊ ပို့ဆောင်သူပါတနာမှ နောက်အချိန်တစ်ခုတွင် ပြန်လည်ပေးပို့ရန် သေချာပေါက် ကြိုးစားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏အော်ဒါအခြေအနေကို ခြေရာခံလိုက်နိုင်ဖို့ သင်အား ကျွန်ုပ်တို့မှ ကူညီပေးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါအီးမေးလ်လိပ်စာမှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
သင်၏ပို့ဆောင်ရန်အားထုတ်မှုပြုသည့်အချိန်တွင် သင်ရှိမနေပါက၊စိတ်မပူပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့ဆောင်သူပါတနာမှ နောက်အချိန်တစ်ခုတွင် ပြန်လည်ပေးပို့ရန်သေချာပေါက် ကြိုးစားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ပို့ဆောင်ရန်လိပ်စာကိုပြောင်းလဲလိုပါကအောက်ပါအီးမေးလ်လိပ်စာများမှတဆင့် လိုအပ်သော အစီအစဉ်များပြုလုပ်နိုင်ရန်အလို့ငှာကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ပေးပါ။
သင်၏ပို့ဆောင်ရန်အားထုတ်မှုပြုသည့်အချိန်တွင် သင်ရှိမနေပါက၊ ပို့ဆောင်သူပါတနာမှနောက်အချိန်တစ်ခုတွင် ပြန်လည်ပေးပို့ရန် သေချာပေါက် ကြိုးစားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။သင်၏ပို့ဆောင်ရန်လိပ်စာကိုပြောင်းလဲလိုပါက အောက်ပါအီးမေးလ်လိပ်စာများမှတဆင့်လိုအပ်သော အစီအစဉ်များပြုလုပ်နိုင်ရန်အလို့ငှာ ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ပေးပါ။
ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိအော်ဒါအတွက် ပို့ဆောင်မှုလိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ်/လက်ခံသူကို မည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်မည်နည်း။
မစစ်ဆေးနိုင်ပါ။ ပစ္စည်းအထုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးမှသာ ထိုပါဆယ်ကို ဖွင့်နိုင်ပါသည်။ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သောပြဿနာတစ်ခုတွေ့ရှိပါက၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့သို့ အောက်ပါအီးမေးလ်လိပ်စာမှတဆင့် ဆက်သွယ်ပေးပါကသင်၏ပစ္စည်းပြန်ပို့မှုများ/လဲလှယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကူညီပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့အသင့်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် များစွာသောပို့ဆောင်သူပါတနာများနှင့် အတူလုပ်ဆောင်သည့်အတွက်၊ ပို့ဆောင်သူပါတနာတစ်ဦးစီအတွက် လုပ်ငန်းချိန်များမှာကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် သင်၏ပစ္စည်းအား မနက် 8:30 မှ ည 7:30 အတွင်း ပို့ဆောင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားနိုင်ပါသည်
ပို့ဆောင်ချိန်အတိအကျကို ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့ဆောင်သူပါတနာများမှ ပို့ဆောင်ချိန်မတိုင်မီကြိုတင်အသိပေးနိုင်ရန် ကြိုးစား၍ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါအခြေအနေများတွင် သင်၏မိတ်ဆွေများ သို့မဟုတ် မိသားစုဝင်များက သင့်ကိုယ်စား ပါဆယ်ကို လက်ခံခဲ့ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ ပါဆယ်ကို ရှာမတွေ့နိုင်သေးပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့သို့ အောက်ပါအီးမေးလ်လိပ်စာများမှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မှ သင့်အား ကူညီပေးရန်ု့အသင့်ရှိပါသည်။
ရေးအဖွဲ့သို့ အောက်ပါအီးမေးလ်လိပ်စာများ မှတဆင့် ဆက်သွယ်ပေးပါက ထိုကိစ္စကို သင့်အတွက် ချက်ချင်းစုံးစမ်းစစ်ဆေးပေးပါမည်။
ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ ထိုသို့သောဝန်ဆောင်မှုအား ယခုအချိန်တွင် ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိပါ။
ONE Championship နောက်တစ်နေ့ပို့ဆောင်မှု ဝန်ဆောင်ခြင်းအား လက်ရှိအချိန်၌ ပံ့ပိုးထားခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်လည်းသင်၏ပါဆယ်ကို ကတိပေးထားသည့်ပို့ဆောင်ချိန်အတွင် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ကို စိတ်ချနိုင်ပါသည်။
မရှိပါ။ အနည်းဆုံးဝယ်ယူမှုမလိုအပ်ပဲ အခမဲ့ပို့ဆောင်ရန် သင့်တွင်အခွင့်အရေးရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့မှ သင့်အားပစ္စည်းပြန်ပို့ရန်ဖောင်ပုံစံတစ်ခုပေးပို့၍ ကူညီပါလိမ့်မည်။ ပစ္စည်းပြန်ပို့မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပစ္စည်းပြန်ပို့မှုမူဝါဒကို ကိုးကားပေးပါ။
သင်၏ပစ္စည်းကို အရောင် သို့မဟုတ် ဆိုဒ်အသစ်တစ်ခုသို့လဲလှယ်လိုပါက၊ သင့်၏မူလအော်ဒါကို ပြန်ပို့ပေးပြီး သင်အလိုရှိသောပစ္စည်းအတွက် အော်ဒါအသစ်တစ်ခုမှာယူထားရှိပါ။ သင့်ထံသို့ထိုငွေပမာဏကိုအလုပ်လုပ်ရက် 7-14 ရက်အတွင် ကျွန်ုပ်တို့မှ ငွေပြန်အမ်းပေးပါလိမ့်မည်။ သင်၏အကောင့်ထဲသို့ ထိုငွေပမာဏ အမှန်တကယ်ခရက်ဒစ်ပြန်ရောက်ရှိသော ရက်မှာ သင့်ဘဏ်၏မူဝါဒနှင့် အသုံးပြုသည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအပေါ်တွင် မူတည်လိမ့်မည်။
အကယ်၍အကယ်၍သင်သည်ချွတ်ယွင်းချက်ရှိသော သို့မဟုတ် မမှန်ကန်သောကုန်ပစ္စည်းကို လဲလှယ်လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့သို့ထိုကုန်ပစ္စည်း၏ တွဲဘက်ပုံများနှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့မှ သင့်အားပစ္စည်းပြန်ပို့ရန်ဖောင်ပုံစံတစ်ခုပေးပို့၍ ကူညီပါလိမ့်မည်။
။မည်သည့်ပစ္စည်းများမှာ ပစ္စည်းပြန်ပို့ရန်အတွက် အရည်အချင်းမပြည့်မီခြင်းမရှိသနည်း။：
သင်၏ငွေပြန်အမ်းမှုနှင်ပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်တို့အမှားတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် အလွန်ဝမ်းနည်းပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့သို့
အောက်ပါအီးမေးလ်လိပ်စာများမှတဆင့် ဆက်သွယ်ပေးပါကကျွန်ုပ်တို့မှ သင့်အတွက် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပေးပါမည်။
အကယ်၍သင်၏အော်ဒါခွဲအိုင်ဒီတစ်ခုလုံးမှ ပစ္စည်းတစ်ခု(SOD) ကိုငွေပြန်အမ်းခဲ့လျှင်၊ ဤပစ္စည်းအတွက်ပို့ဆောင်ခအား ပြန်အမ်းငွေပမာဏထဲတွင်ပါဝင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ပို့နိုင်ပါသည်။ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ကိုအောက်ပါအီးမေးလ်လိ ပ်စာမှတဆင့်ဆက်သွယ်၍ အော်ဒါအိုင်ဒီ/အော်ဒါခွဲအိုင်ဒီကို အီးမေးလ်အကြောင်းအရာထဲတွင် ဖော်ပြပေးပါ။
ပစ္စည်းပြန်ပို့မှုများအတွက် ပို့ဆောင်မှုစရိတ်ကို သင်မှ ကျခံရန်မလိုအပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ထံ မက်ဆေ့ချ်ပို့ပါ: Facebook ပေါ်တွင်
တနင်္လာနေ့ - သောကြာနေ့, 10am - 5pm
© 2020 Copyright ONE Championship ဆိုင်. All Rights Reserved